ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: နော်ဝေရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ့ ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ (၂) (3 Videos)
နော်ဝေရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ့ ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ (၂) (3 Videos)
Video - Ko Nyo (Oslo) & UnitedKachin
ပြောတာကတော့လွယ်တယ်ဗျာ။လုပ်တာကျတော့ခက် ရောပဲ ဇာဂနာကိုကြည့် ခုဆိုပျက်လုံးတောင်ကောင်းကောင်းမထုတ် နိုင်တော့ဘူး။ ရခိုင်အရေးကိုပေးခုထိအဖြေမပေးနိုင်ဘူး။ ၃ လရှိပြီ။အဝေးရောက်သူငယ်ချင်းတွေ။ ဆန္ဒပြတာထက် ပိုကောငားမယ်အကြံတွေပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်ပဲထင်တယ်ဗျာ။
ဆန္ဒပြတာလဲကောင်းတော့နည်းနည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ။ဒီအချိန်က ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းချင်အုံးတော့ သူကအာဏာရှင်မှမဟုတ်တော့တာ ။ဦးသန်းရွှေလောက်ဘယ်လွယ်မှာလည်း။ အာဏာရှင်လို လုပ်ခိုင်းနေကြတာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား။
ဒါဆိုမေးကြည့်ရအောင် သူ့မှာ ပြင်ချင်တဲ့စိတ်ရှိလား ???ရှိရင် ဘာလို့ပြင်မယ်မပြောတာ လဲ...
ပြင် လာခဲ့လို့ အတိုင်းအတာတခုထိတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီ မဟုတ်လား? ဒါတွေကိုလက်မခံပဲ ပူးပေါင်းပြီး ဆက်ပြုပြင် ဖို့
စိတ်မကူးပဲ ဘေးက နေ ကန့်လန့်တိုက်နေကြတဲ့ လူစား ၂ မျိုး
ရှိတယ် ။ တမျိုးက အမှန်ကို မမြင် တဲ့လူတွေ, နောက်တမျိုးက
အခု နော်ဝေ က ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေလို အခွင့်အ ရေးသမားတွေ
ကိုယ့်တလုပ်တဆုပ် အတွက် ပြည်ပ မှာ အခွင့်အ ရေးရှာ
ပြီး ဂွင် ဖန်တဲ့ လူတွေ။